Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Deegaanno Ka Tirsan Sh/hoose. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Yugaandha ee qaybta ah shisheeyaha dalka kusoo duulay waxay saacadihii lasoo dhaafay xarakada shabaabul Mujaahidiin kala kulmeen weeraro kala duwan kuwaas oo lagula beegsaday deegaanno ka tirsan Sh/hoose.
Weerarada oo ahaa kuwa jidgal oo gaarayay illaa 2 weerar waxay Mujaahidiintu siyaabo kala duwan ugu dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kuffaarta Yugaandha oo saad ciidan u siday qaar ka mid ah saldhigyadooda gobolka Sh/hoose.
Weerarka koowaad waxa uu kolonyada shisheeyaha oo kasoo amba baxay magaaada Muqdisho ku qabsaday inta u dhaxaysa deegaannada No/60 iyo Buufow oo ka wada tirsan Sh/hoose.
Illaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin ah oo ku aadan khasaaraha ciidamada saliibiyiinta Uganda ku gaaray weerarka balse waxay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay wariyeen in la maqlayay baroorta ciidanka Yugaandha taas oo muujinayso in uu jiro khasaare dhimasho oo saliibiyiinta ku gaaray dagaalka.
Weerarka labaad ee jidgalka ah waxay ciidamada Mujaahidiintu u dhigeen kolonyo kale oo ka tirsan ciidamada kuffaarta Uganda oo kasoo ambabaxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday deegaanka Shalaanbood. kammiinkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa Ceelwareegow iyo Buufow. waxaana jira khasaare kala duwan oo ciidamada Yugaandha kasoo gaaray.
Ciidamada Yugaandha waxay aalaaba wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo gobolka Sh/hoose kala kulmaan weerari jidgal ah oo kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab halkaas oo ciidamada Yugaandha kala kulmaan khasaare lixaad leh.